१५९७.७१ विन्दुमा नेप्से, १ अर्ब ६३ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
कात्तिक ५, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक १ हजार ५९७ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १३ दशमलव ९४ अंक बढेको हो । साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि उकालो लागेको नेप्से बुधवार पनि बढेको छ।
बुधवार १९२ ओटा कम्पनीको ५५ लाख ९ हजार ४४८ कित्ता शेयर २२ हजार ४८२ पटकमा रू. १ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यस दिन एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २४ करोड ९२ लाख ५७ हजार भन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
कम्पनीले आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै सर्वाधिक खरीदविक्री भएको देखिन्छ । कम्पनीले १९ प्रतिशत बोनस शेयर १ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै बुधवारको कारोबार दिनमा अधिकांश बाणिज्य बैंकका कम्पनीका शेयर मूल्य बढेको छ ।
अहिलेसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरुले नगदमा भन्दा बोनस शेयरमा जोड दिएका छन् । सोही कारणले पनि लगानीकर्ताहरुले बाणिज्य बैंकको शेयर खरीद गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दै गएकाले निक्षेपमा न्यून ब्याजदर पाइने भएकाले पनि शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आर्कषण बढेको देखिन्छ ।
बुधवार पनि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य मंगलवार रू. ४८८ मा बन्द भएकोमा बुधवार वृद्धि भएर रू. ५३६ पुगेको हो । बुधवार उक्त कम्पनीको ४५ हजार ७४१ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
सबैभन्दा बढी नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य ५ दशमलव ०५ प्रतिशत घटेको छ भने दोस्रोमा खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य ४ दशमलव ७२ प्रतिशत घटेको छ ।
कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये होटल समुहको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत,जलविद्युत कम्पनीको १ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, वित्त समुहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको परिसूचक शून्य दशमलव २१ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकी समुहको परिसूचक बढेको छ ।
सबैभन्दा बढी ब्यापार समुहको परिसूचक २ दशमलव १९ प्रतिशत बढेको छ ।
३.८८ अंकले बढेको बजारमा ३ अर्ब ११ करोड बराबरको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, ८]
दोस्रो घण्टामा ६.४२ अंकले घट्यो नेप्से, सर्वाधिक कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको (१ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, ८]
पहिलो घण्टामा १.११ अंकले ओरालो लाग्यो बजार (१२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, ८]
६ अर्ब ९० करोडभन्दा बढीको कारोबार : कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै[२०७७ मंसिर, ७]